Idris Elba – Stars – Channel Myanmar
Molly’s Game (2017) Molly's Game ဟာ နာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်တွေ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ အားကစားသမားတွေ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပိုကာဝိုင်းတွေကို အသက် ၂၆နှစ်အရွယ်နဲ့ဦးစီးလုပ်ဆောင်ခဲ့သူ Molly Bloomအကြောင်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်… ပိုကာဝိုင်းတွေကို ကော်မရှင်ခယူပြီး တရားမဝင်ဦးစီးခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရ ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုအပေါ် အရည်အချင်းပြည့်လှတဲ့ရှေ့နေတစ်ဦးနဲ့ပေါင်းကာ တရားရင်ဆိုင်ကြပုံကို ရှုစားကြရမှာပါ… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်… မော်လီဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝတုန်းကတော့ အိုလန်ပစ်ပွဲတွေမှာ စကိတ်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်နိုင်ဖို့ရည်သန်ပြီး စကိတ်အားကစားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ… အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ပြည်နယ်ရဲ့ထိပ်တန်းလက်ရွေးစင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ဝါသနာပါရာအားကစားကို ရပ်တန့်ပစ်ရတော့မယ့် အခြေအနေဆိုက်လာပါတယ်… ကျောရိုးမကြီးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန် အရိုးကွေးညွတ်မှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်…မော်လီ့ကို ဘယ်တော့မှ စကိတ်မစီးဖို့ ဆရာဝန်က မှာလိုက်ပါပြီ… ဒါကြောင့် အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် မော်လီဟာ ဥပဒေကျောင်းဆက်မတက်သေးဘဲ နယူးယော့ခ်ကို ပြောင်းလာပါတယ်… ဘားတစ်ခုမှာစားပွဲထိုးဝင်လုပ်ရင်း…သူ့Careerတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ပါတော့တယ်… ပိုကာဝိုင်းမှာ စာရေးမ အနေနဲ့ လုပ်ဖို့ပါ… ဒီလိုနဲ့ မော်လီဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုတွေများ ပိုကာဝိုင်းတွေကို ဆက်လက်ဦးစီးပြီး…ဝင်ငွေသန်းနဲ့ချီရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သလဲ… လောကဓံအလှည့်အပြောင်းကို ဘယ်လိုများခံနိုင်ရည်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဆက်လက်ရှုစားကြပါ (ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး မ၀င်ဒီပါ) File Size : (1.1 GB) and (447 ...
Star Trek Beyond (2016) Star Trek Beyond ကနဦးစွာ ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံပါရစေ။ Director Justin Lin တစ်ယောက် ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်မယ်လို့ ကြားသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အလွန်စိတ်ပျက်မိခဲ့တယ်။ Fast and Furious ကောင်က ကိုယ်တွေကြိုက်တဲ့ Star Trek ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပေါ့။ အခုလိုပြောလိုက်လို့ စာဖတ်သူတို့ ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့ ။ တစ်ကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ တစ်ကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ Star Trek ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားအဖြစ် ယခုဆို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။ -------------------------------------------------------------------------------- ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့် လောက်ကို ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဗျာ။ Star Trek into Darkness က တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဝင်ငွေ $467 Million နဲ့ အောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ တစ်ချို့ ကတော့ သူတို့ သဘောကျတဲ့ Khan ဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဖော်တာ ...
IMDB: 7.1/10 184,688 votes
The Mountain Between Us (2017) အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၇ မှာထွက်လာတဲ့ The Mountain Between Us ဆိုတဲ့ ဒရမ်မာကားကောင်းလေးပါ ဒေါက်တာဘန်ဘက်စ်အဖြစ် Idris elba ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အဲလက်စ်အဖြစ်ကိုတော့ တိုက်တန်းနစ်ဇာတ်ကားရဲ့ မင်းသမီး Kate Winslet ကသရုပ်ဆောင်ပေးထားတာပါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လုံးဝမသိကြတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ မုန်တိုင်းကြာင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်အတူလေယာဉ်စင်းလုံးငှားရာကနေ စတွေ့ခဲ့ပါတယ် သူတို့လေယာဉ်ဟာ မထင်မှတ်ဘဲ နှင်းတောင်ပေါ်မှာ ပျက်ကျခဲ့ပါတယ် လူသူအရောက်အပေါက်နည်းပြီး အရမ်းမြင့်တဲ့နေရာမှာ ကျသွားတဲ့အတွက် ဆက်သွယ်ဖို့လဲ လုံးဝမရခဲ့ပါဘူး အဲတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လုံးဝမသိကြတဲ့ ဒီလူနှစ်ယောက် အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားကြမလဲ သူတို့တွေ နောက်ဆုံးမှာ အသက်ရှင်ဖို့ အခွင့်အရေးရော ရပါ့မလား အဲတောင်တွေပေါ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲဆိုတာတော့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦး IMDb 6.3 ထိရထားတဲ့ ဒရမ်မာကားကောင်းလေးမို့ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးလို့ ညွှန်းပေးပါရစေ File Size : (900 MB) and (300 ...
The Dark Tower (2017) ဒီဇတ်လမ်းဟာ စာရေးဆရာ Stephen King ရဲ့ ၀တ္တုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်အသက်သွင်းထားတာပါ ဇတ်လမ်း အစကို ကြည့်မိရင် အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် ကြည့်ရတာ နောင်တ မရနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုအဖြစ်ညွှန်းပါရစေ... Movie Review ========== ကမ္ဘာတွေဟာ အများကြီး ရှိနေပြီး ကမ္ဘာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ စွမ်းရည်တွေ မတူညီကြပါဘူး ဒီကမ္ဘာတွေ အားလုံးရဲ့ အလယ်ဗဟို တည့်တည့်မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ထောက်တိုင် တစ်ခု တည်ရှိနေပြီး ထို ထောက်တိုင်ကြီး မရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့ ကမ္ဘာတွေဟာ မှောင်အတိပြီး၍ မီးလောင်ကျွမ်းကုန်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်... ထို ထောက်တိုင်ကြီးကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြံရွယ်နေသူတွေကတော့ ဝေါ်တာ ဆိုသော မကောင်းဆိုးဝါး နှင့် အရေခွံခြုံသူများ ဖြစ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးဖို့ရန် အတွက် စိတ်ထားသန့်စင်သော ကလေးများကို ဖမ်းပြီး စိတ်စွမ်းအင် ထုတ်ယူ၍ ကမ္ဘာတွေရဲ့ အလယ်ဗဟို ထောက်တိုင်ကို တစ်ဖြေးဖြေးအားနည်းစေရန် တိုက်ခိုက်လျက် ရှိပါတယ်... တစ်နေ့မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ခုပေါ်မှာ စိတ်စွမ်းအင်အမြင့်ဆုံး ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျိတ်ချန်ဘာ ကို အရေခွံခြုံတွေ ရှာတွေ့သွားပြီး ဖမ်းဆီးရန် ရောက်လာစဉ်မှာပဲ ကြိုတင်အကြားအမြင်ရထားတဲ့ ဂျိတ်ဟာ ကမ္ဘာအလယ်ဗဟို ထောက်တိုင် ကို ကာကွယ်သူ သေနတ်သမားကို ရှာဖို့ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်.. ထို အချိန်မှာပဲ ...
The Losers (2010) ဒီကားကတော့ အက်ရှင်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…. စစ်ဆင်းရေးတစ်ခုအတွက်ကြောင့် U.S. Special Force တစ်ဖွဲ့ကို Bolivian တောထဲကိုစေလွှတ်ပြီး စစ်ဆင်ရေးကိုစတင်စေခဲ့ပါတယ်… Clay , Jensen , Roque , Pooch နဲ့ Cougar တို့ဟာပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ Max ကိုဥာဏ်မျိုးစုံနည်းပေါင်းစုံနဲ့ ရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်…. စစ်ဆင်ရေးမှာသူတို့တွေ လှည့်စားခံလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့သေသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး သူတို့ကိုလာပြီးဆက်သွယ်တဲ့ Aisha နဲ့အလုပ်ထပ်မံလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်…. သူတို့တွေစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကိုအတူတူလုပ်ရင်း Max ကိုချေမှုန်းနိုင်မယ့် အစီစဉ်တွေကိုဘယ်လိုချလဲ… ဘယ်လိုတွေရန်သူတွေနဲ့အဖွဲ့လိုက်ဥာဏ်သုံးပြီး တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီကားဟာ အဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားမှု့တွေကိုအခြေခံထားလို့ တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ နာမည်နဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….. File size…(845 MB , 597 MB) Format…mp4 Duration….01:37:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator…Zayyar Htet Encoder….Moe Myint Lwin Jeffrey Dean Morgan …. Clay Chris Evans …. Jensen Columbus Short … Pooch Oscar Jaenada …. Cougar Download with VIP Link Download with Pcloud Download with Pcloud (Small Size) Download ...
IMDB: 6.4/10 76,440 votes
The Take (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး သူ့ရဲ့ မူရင်းဇာတ်ကားနာမည် Bastille Day ကိုဆို လူတော်တော်များများသိနေကြမှာပါ အကြမ်းအရမ်းတွေ အက်ရှင်ကားတွေကို သိပ်ကြိုက်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဆို သဘောတွေ့ကြမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ပြင်သစ်မှာ်ခါးပိုက်နိုက်အဖြစ်အသက်မွေးနေတဲ့ မယ်ရီမန်ဆန် ဟာ တနေ့မှာ အိတ်တလုံးကိုခိုးလာရာမှ မထင်မှတ်ပဲ ၀က်ဝံရုပ်တခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ် သူဟာ မထင်မှတ်ပဲ ၀က်ဝံရုပ်ကိုလူစည်ကားတဲ့ နေရာတခုမှာ စွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီး ပိုမထင်မှတ်ထားတာက ထို ၀က်ဝံရုပ်ထဲမှာ ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်ခုပါနေတာပါပဲ ဒီလိုနဲ့ မယ်ရီမက်ဆန် တယောက် ဘယ်လိုအရှုပ်တော်ပုံတွေထဲကို ပါဝင်နေမလဲ ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကိုကော ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက် ကြည့်ရှူရမှာပါ Download On Pcloud
The Take (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jungle Book (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Jungle Book ဟာ Rudyard Kipling ရဲ့ နာမည်ကျော်စာအုပ်နဲ့ 1967 ကထွက်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Jungle Book ကာတွန်းကားတို့ကို လူနဲ့ Visual effect တွေသုံးပြီး အသက်ပြန်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Jungle Book ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ပိတ်သတ်ကြီးက သိပြီးသားမို့လို့ အထွေအထူးတော့ ပြောပြစရာမရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ ရိုက်ထားတဲ့အကြောင်း အရင်ပြောပါ့မယ်။ Iron Man ဒါရိုက်တာ Jon Favreau ရဲ့လက်ရာဖြစ်တဲ့ Jungle Book ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားတွေထဲမှာပါပါတယ်။ တော်တော်များများအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကားဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းစစချင်း Jungle Book ဆိုတဲ့စာတန်းထိုးကတည်းက ဇာတ်လမ်းဆုံးတဲ့အထိ ကြည့်နေသူကို တောကြီးမျက်မည်းထဲရောက်သွားသလိုဖြစ်အောင် လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Cinematography ကိုလည်း အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ Mowgli နဲ့ eye-level လောက်မှာပဲ အများဆုံးရှိပြီး ရိုက်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ဟာ သူ့နေရာမရောက်ရင်တောင် ...
Jungle Book (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး